China Famboarana jirofo tongolo lay vita pirinty | Nongchuanggang
Ny jirofo vita amin'ny tongolo lay voatahiry haingana dia iray amin'ireo vokatra fanodinana tongolo lay. Miaraka amin'ny tongolo gasy no akora fototra, dia efa ampiasain'ny fianakaviambe iraisam-pirenena izany. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny famokarana an'io karazana jirika tongolo lay io dia mila fanaraha-maso ny akora, fanosorana, peeling ary hafa mihoatra ny dingana sy dingana 10.
Fanaraha-maso ny akora: ny akora dia takiana aloha amin'ny endrika feno, tsy misy lo, tsy simba, tsy misy aretina na bibikely bibikely, tsy misy jirofo vita amin'ny tongolo siramamy sy vokatra simba na loto hafa.
Mandroboka: atobohy anaty rano madio ny tongolo lay iray manontolo mandritra ny 15 ~ 30 minitra hanamorana ny fikolokoloana. Peeling: Voaso ny tongolo lay voahosotra miaraka amin'ny mpanamory tongolo lay indray mandeha. Fanapahana faharoa: ho an'ireo tsy voahitsakitsakin'ny tongolo lay avy amin'ny fanodinana ny masinina, dia mila esorina amin'ny tanana ny jirofo mba hahazoana manadio ny hoditra tongolo lay.
Famaritana: ny haben'ny jirofo vita amin'ny tongolo lay dia voamarina ary naoty araka ny baikon'ny mpanjifa. Fanaraha-maso: fanaraha-maso ny mpiasa ao amin'ny atrikasa, fanesorana ireo aretina sy bibikely bibikely, loko ratsy, fahasimbana, maratra maina, teboka rotona ary vokatra maloto hafa sy tsy fahalotoana.
Famonoana otrikaretina: fanekena ny vary tongolo lay mahay ao anaty 100 mg / litatra ny fitrohana vahaolana sodium hypochlorite 15 minitra, hahatratra ireo bakteria pathogenika ambonimbony hamonoana ny tanjona. Fanadiovana: Sasao amin'ny rano mandeha mba hanala ny vahaolana residuana hypochlorite sôma. Tsy fahampian-drano: esory amin'ny alàlan'ny masinina fanamainana rivotra ny hamandoana ambonin'ny vovon'ny tongolo lay.
Fangatahana haingana: ataovy ao anaty vata fampangatsiahana karazana fehin-kibo ny vary tongolo gasy mahay aorian'ny andiam-pitsaboana etsy ambony. Ny mari-pana amin'ny ora famokarana dia ambany -25℃, ary ny maripana eo afovoan'ny vokatra dia ambany -18℃ aorian'ny hatsiaka haingana.
Fonosana: ny famonosana dia tsy maintsy atao anaty efitrano fidiovana manokana sy madio, ary ny mari-pana habakabaka dia takiana mba hifehezana ao anatin'ny 0 ~ 10℃.
Famaritana metaly: ny vokatra rehetra dia tsy maintsy mandalo ny detector vy, ny mpiasa atokana ho an'ny atrikasa hiasa, amin'ny mpiasa fanaraha-maso kalitao tsara mba hanao fitsapana ny fahatsapana isan'ora.
Refrigeration: ny vokatra fonosana dia tokony hapetraka ao anaty fitehirizana ara-potoana. Mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra, ny hafanan'ny fitehirizana dia tokony tazonina amin'ny -20±2℃ ary ny maripana afovoan'ny vokatra vita eto ambany -18℃.
Karazana Tongolo gasy
Karazana fanodinana Voaso
Fangatahana mangatsiaka IQF
endrika Endrika manokana
Lanja (kilao) 10
Anaran'ny vokatra Jirofo tongolo lay mangatsiaka vaovao
ara-nofo Tongolo gasy vaovao 100%
tsiro Matsiro mahazatra
Size 150-200 / 200-280 / 280-380pcs / kg
FIAINAN-TANY 24 Volana ambanin'ny -18 Degre
Fonosana 10 Kg / CTN
MOQ 12 taonina
Terms Terms FOB CIF CFR
Fandefasana avy hatrany
Teo aloha: Jirofo tongolo gasy vaovao
Manaraka: Tongolo gasy vaovao
Tongolo gasy maty maina